Mifananidzo - Geofumadas
Topography. mapoka emaodzanyemba
Tekinoroji nhau muGeo-engineering - Chikumi 2019
Kadaster na KU Leuven vachabatana mukusimudzira INDE muSanta Lucia Kunyangwe mushure mekuyedza kuzhinji, mukati mevashandi vehurumende, kushandiswa kwakapamhama / nehungwaru kweruzivo rwepasi rose mukutonga kwemazuva ese, marongero eruzhinji uye maitiro ekutora yakaramba yakaganhurirwa. Mukuyedza kubatsira iyo ...
Kuedza kunyatso kweGoogle kukwirisa dhata - Kushamisika!
Google Earth inopa mukana wekukwirisa dhata rako neGoogle yemahara API kiyi. Civil Site Dhizaini, inotora mukana weiyi ingangoita neSatellite yayo nyowani kuSurface mashandiro. Iri basa rinokutendera iwe kuti usarudze nzvimbo uye chinhambwe pakati pemapaneti egridhi, inodzosera nzvimbo ine mitsara yemakona yakabatanidzwa ne ...
Google pasi / mamapu, topografia
Contour mitsara kubva kuGoogle Earth - mumatanho matatu
Ichi chinyorwa chinotsanangura maitiro ekugadzira mitsara yemakoto kubva kuGoogle Earth modhi yedhijitari. Kune izvi isu tinoshandisa plugin ye AutoCAD. Nhanho 1. Ratidza nzvimbo yatinoda kuwana iyo Google Earth dhijitari modhi. Nhanho 2. Tumira iyo digital modhi. Uchishandisa AutoCAD, uchiisa iyo Plex.Earth Wedzera-ins. Pakutanga,…
Leica Geosystems inopa chigadziro chitsva chekutora dhiyabhorosi data
HEERBRUGG, SWITZERLAND, APRIL 10, 2019 - Leica Geosystems, chikamu cheHexagon, nhasi yazivisa kuvhurwa kwechishandiso chitsva chekutora, modelling uye dhizaini maitiro; Leica iCON iCT30 kuunza hunyanzvi mukuvaka indasitiri. Iyo iCON iCT30 chishandiso, chakabatanidzwa neLeica iCON software yekuvaka, iri…
Nharaunda yakasanganiswa - Mhinduro inodiwa neGeo-Injiniya
Isu takafanirwa kurarama nguva ine mbiri panguva iyo dzakasiyana nhanho, maitiro, vatambi, maitiro uye maturusi ari kusangana kune wekupedzisira mushandisi. Izvo zvinodiwa mumunda weGeo-engineering nhasi ndeyekuti uwane mhinduro dzinogona kugadzirwa nechinhu chekupedzisira kwete zvikamu zvacho chete; Kunge ...
Bentley Systems DGN Ini-muenzaniso
Leica Airborne CityMapper - inonakidza mhinduro yemepu yeguta
Zviri pachena kuti hatife takaona yechokwadi SmartCity, ine yayo yakanaka maonero. Zvichida kuti pane zvakawanda zvinodiwa muzvinhu zvedu pane kufunga nezveInternet yezvinhu. Kunyangwe izvo izvo izvo zvinogadziriswa nevagadziri, hapana akavabvunza. Chokwadi ndechekuti mujaho wekuzvimisikidza mu ...
Dhirokorora nharaunda muAccCAD kubva pane imwe Excel CSV faira
Ini ndaenda kumunda, uye ndaongorora huwandu hwese gumi nemapfumbamwe eepfuma, sezvakaratidzwa mumufananidzo. 11 eaya mapoinzi ndiyo miganhu yenzvimbo isina munhu, uye ina ndiwo makona eimba yakasimudzwa. Kana ndichirodha pasi iro data, ndarishandura kuita kamu rakaparadzaniswa faira, inozivikanwa se ...
BIM Kufambira Mberi - Yegore Negore Musangano Pfupiso
Kufambira mberi mukumisikidzwa kweKuvaka Ruzivo Modeling (BIM) yanga iri dingindira rekucheka cheMusangano wegore negore wezvivakwa, wakaitwa muna Gumiguru muSingapore. Kunyangwe account yangu yeTwitter yaive yakabiwa neiyo hashtag # YII2017 mumazuva iwayo, heino pfupiso. Rwendo Runo nguva ino ini ...
BIM DGN Ini-muenzaniso
Yakarurama chinangwa-inoenderana cadastre - maitiro, synergy, hunyanzvi, kana zvisina maturo?
Kudzoka muna2009 ndakarondedzera mashandisirwo eiyo shanduko yeCadastre yemasiparati, iyo mumafungiro ayo echisikigo yakaratidza kufambira mberi pakati pezvikonzero nei pakutanga yaitora cadastre nekuda kwemitero, uye kuti izvo zvinoda sei zvishoma nezvishoma kubatanidza dhata, vatambi uye matekinoroji anoitwa nekubatana kwechimiro. Zvegore ra2014 ...
Cadastre, Featured, My geofumadas, topografia
Tumira mapepa uye ugoita chidimbu chemugodhi mune imwe faira reCAD
Kunyangwe chii chinotinakidza pamagumo eichi chiitiko chakadai kuita zvikamu zvemuchinjikwa pamwe nemutsara axis, kuverenga akacheka mavhoriyamu, embankment, kana iwo mamwe profiles, isu tichaona muchikamu chino chizvarwa cheiyo digital terrain modhi kubva nguva yekupinza mapoinzi, kuti ...
Matanho ekugadzira mapu achishandisa drones
Kugadzirwa kwemepu uchishandisa nzira iyi kunogona kuita dambudziko hombe, rimwe rematambudziko rakakosha zvakanyanya nemhedzisiro yekurasikirwa nemwedzi yakakosha yebasa rinobatsira kana iwe usina ruzivo rwekare mune iri basa. Vakatangi veAerotas Mapping System vanotaura nesu muchinyorwa chePOB ...
kwakaita nzvimbo yacho
Circular 1: Congress TOPCART 2016
Illustrious Official College yeGeomatics neTopographic Injiniya inozivisa XI International Congress yeGeomatics uye Earth Sayenzi, ichaitirwa kuPalacio del Congreso de Toledo (El Greco), kubva muna Gumiguru kusvika 26 Gumiguru, 30. Ichi chiitiko chakakosha chine chinangwa chekuzivisa kufambira mberi kwesainzi nehunyanzvi ...
Chinyakare topography vrs. LiDAR. Kururamisa, nguva uye mutengo.
Kugona kuita basa neLiDAR kungave kwakanyatso nyatso kupfuura neyakajairwa ongororo? Kana iwe uchidzikisa nguva, nemarii muzana? Uchaderedza zvakadii mari? Nguva dzakachinja zvechokwadi. Ndinoyeuka apo Felipe, muongorori aindishandira mundima, akauya nebhuku remapeji makumi maviri neshanu rezvikamu zvemuchinjikwa kuti agadzire ne ...
Featured, Engineering, My geofumadas, topografia
Dhirorera pikoni mu Microstation kubva kune Excel
Uchishandisa iyi template, unogona kudhirowa polygonal muMicrostation, kubva pane runyorwa rwema bearings uye madaro muExcel, kana runyorwa rwe x, y, z zvinongedzo. Nyaya 1: Chinyorwa cheMadirections uye maDanho Ngatiti isu tine tafura iyi yedhata kubva kumunda: Mumakoramu ekutanga isu tine zviteshi, ...
Kuve muongororori chinhu chinoitika muupenyu hwose.
Kuda kwaKen Allred kwe topography hakuzivi miganho, uye kushingairira kwake, kwechidzidzo chinoratidzika kuva newbies semasvomhu equation, chinotapukira. Retired St. Albert MLA haifunge kaviri nezve kunongedza magetsi ekuongorora kana vangobaya matanho avo akareruka mu ...
Google Earth kosi: kubva kuchisimba kuenda kumberi
Google Earth software yakauya kuzoshandura nzira yatinoona nayo nyika. Chiitiko chekukomberedza ...
PTC CREO Parametric Kosi - Dhizaini, Ansys uye Simulation (3/3)
Creo ndiyo 3D CAD mhinduro iyo inokubatsira iwe kumhanyisa chigadzirwa hutsva kuti iwe ugone kugadzira zvirinani ...